३२ हजार कर्मचारीको जागिर जोखिममा – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौं, साउन १ । करार तथा ज्यालादारीमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीले मंगलबारदेखि सरकारी कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारी कार्यालयले औपचारिक रूपमा निष्कासनको निर्णय नगरे पनि उनीहरूलाई मंगलबारदेखि कार्यालय नआउन सूचित गरिसकेका छन् ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि करार र ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थप गर्न नसक्ने जनाएपछि देशभरका झन्डै ३२ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन् । त्यस्ता कर्मचारीको संख्या काठमाडौंमा मात्र करिब १३ हजार छ ।
संघ (केन्द्र) देखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका कार्यालय खारेज र मर्ज भएपछि फाजिलमा परेका करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने जानकारी यसअघि नै दिइसकिएको छ ।
करार र ज्यालादारी कर्मचारीको छाता संगठन अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले हाजिर नगराए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सम्बन्धित कार्यालयले नै नाम काटेर पठाएकाले थप्न नमिल्ने जिकिर गर्ने गरेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: karmachari, कर्मचारीको जागिर जोखिममा
रोनाल्डोको गोल, युभेन्ट्स सेमिफाइनल प्रवेश
बार्सा र रियल कोपा डेल रेको अन्तिम १६ मा प्रवेश
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आज, कति समयमा आउला नतिजा?
उच्च पदमा पुगेका महिलाले किन गर्छन् बढी डिभोर्स? यस्ता छन् मुख्य कारण
राजधानीमा ‘मेट्रो रेल’ निर्माणका लागि डीपीआर सम्झौता
यी तीन चिनी मिलको बैंक खाता रोक्का गर्दै सरकार
एकै प्रकृतिको घटनाः पूर्वयुवराज पारसलाई छुट, आस्थामाथि किन उजुरी?